Indlu yethu yasogwini itholakala phakathi komphakathi onesango okwazi ukufinyelela kalula ePlaya El Cuco. Indlu yasebhishi ibiyelwe ukuze ukwazi ukuba nobumfihlo endaweni futhi ube nokuvikeleka. Indlu iphinde ibe namagumbi okugeza angu-2 agcwele kanye nendlu encane engu-1, ikhishi (isitofu, ifriji, amapani, namapuleti), kanye ne-lavadero. Sinama-hammocks angu-5 angasetshenziswa ngesikhathi sokuhlala kwakho. Amakamelo okulala ane-air-conditioning kodwa abalandeli bayatholakala ngesikhathi uhlala.
Sithemba ukuthi uzokujabulela futhi uphumule ngesikhathi sokuhlala kwakho!
Igumbi lokulala lokuqala linomnyango wengilazi oslayidayo otholakala esitezi sokuqala. Ayikho i-A/C
I-Rancho Chaguita itholakala emphakathini ozimele onesango eligadayo 24/7 (Banikezwe abantu abavikela indawo yokuhlala). Bonke abanikazi bezindlu emphakathini osesangweni bayayihlonipha futhi bayayiqaphela indawo kanye nokugcinwa kwayo.
Imithetho yesango lomphakathi.
1- AKUVULELEKILE ukupaka izimoto zakho kunoma iyiphi enye indawo noma ngaphandle kweRancho Chaguita. Sicela upake izimoto zakho ngaphakathi kwendawo yase-Rancho Chaguita, izimoto ezi-3 zingena ngaphakathi kwendawo yesango. Noma yiziphi izimoto ezingaphezu kwe-3 kufanele zipake ngaphandle komphakathi wesango (Umgwaqo omkhulu). Sicela ucabangele ukuthi lo mphakathi onesango futhi sicela uhloniphe impahla yomakhelwane bethu.
2- Uma unquma ukuphuma emphakathini ongenamasango ngesango elikhulu eliluhlaza okwesibhakabhaka, sikucela ngenhlonipho ukuthi ulivale ngemuva kwakho.
Uma usizo ludingeka ngicela ungithumelele umyalezo.